Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Nwee Nchekwa dịwara
emelitere ikpeazụ: Apr. 08 2020 | 4 min agụ
Otú ọ dị-amasị gị na-eme ya, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ize ndụ egwuregwu. Ọ bụghị ha na-amabughị nwere ike ịbụ ndụmọdụ inye ụmụaka ma dị ka a atụmatụ kwụsị ịdị na otu, o nwere ọ dịkarịa ala otu doro anya drawback. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ di na nwunye nwa nwanne nne gị, ịchọta onye dajụọ na ahụ ga-agụnye-eme anya na kọntaktị na-amabughị, na-ekere òkè na ha mkparịta ụka na-ezute ha otu-na-otu.
E nwere ihe abụọ doro anya ize ndụ ebe a. Nke mbụ bụ na gị na enyi ọhụrụ nwere ike na-egosi na a zuru charmer ma pụrụ n'ezie ịbụ a oyi-blooded philanderer na a ndekọ nke obi-na-agbasa. Ha ga-eche ihe ọ bụla nke na-eduga gị na, na-egwu egwuregwu na-azọpịa ihe mmetụta uche gị. Nke ahụ bụ ihe ọjọọ zuru ezu na ị na-puru nwere ezu nke ndị dị otú ahụ na-ama.
Nke abụọ ize ndụ bụ ọbụna njọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị ukwuu rarer. The mara mma na-amabughị na ị izute na mmanya pụrụ n'ezie ịbụ onye gbapụrụ mara ikpe si obodo sanatorium. Kama nke ịchọta onye na-eme ka ị na-eche nchebe ndị ọzọ nke ndụ gị, ị bulie onye elu bụ ndị na-aga na-etinye gị nchekwa na n'ihe ize ndụ na-achọ ka ị na-wepụ a usoro nke ikpe iwu na ọhụrụ mkpu usoro.
Ọ bụ ezie na Ohere nzute onye dị ka a online bụ nnọọ obere, ọ bụ uru na-eme ka mgbalị iji kpachara anya. Ke ibuot emi, anyị na-aga ikwu banyere otú duzie doro anya nke ìgwè nke abụọ a na-anọ mma online.
Anonymity he Ma Ụzọ
Mgbe ị na-izute onye na a mmanya, na mbụ ghota na-elu-ihe dị a nchekwa ego dị ka ọ bụ a ego-esi. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye mara mma nọ ọdụ naanị na tebụl ọzọ ka gị, tupu ị na-ọbụna na-enye ha a anya tupu ị na-eme ụdị ọ bụla nke na kọntaktị na ihe niile ị na-edebe ha maka a nkeji ole na ole iji hụ otú ha na-akpa àgwà na waiters, site na ha ma ọ bụ na ndị mmadụ na-agafe. Ọ bụrụ na ha na-akparị, mpako ma ọ bụ nanị ihe bara nnọọ wetara, ọ dịghị mkpa otú ihe a looker ha na-, na ị ka na-aga na-anya nri na site na. Naanị ma ọ bụrụ na ị na-n'aka na ha na-na na nkịtị, mepere anya mmadụ Ị na-agbalị ime ka anya, ịtụcha elu na obi ike iji na-eche ihu jụrụ ajụ na-eme ka gị aga.
Ma mgbe ị na-eme ka ọ na-akpali, na ị na-mgbe na-achọ maka obere n'ókè na-agwa gị na onye ị na-agwa okwu bụ ihe na-erughị nkịtị. E nwere ụdị nile nke clues-enyere gị aka ime nke: ụzọ onye Uwe, ụzọ ha okwu na ha ahu asụsụ aha ma ole na ole na ị na-achọpụta na ha niile na-enweghị ọbụna na-amara na ị na-achọ ha.
A ṅụrụtụ okpu na a Texas drawl ihe atụ, na-agwa gị n'otu ntabi ebe mmadụ bụ na ebe ha na-eguzo mba omenala ike. Ọchapụ ntutu na ahịrịokwu ndị na-ejedebe 'Dude’ na-agwa gị nnọọ otu ihe ahụ. Ụjọ na-atụ twitches, agagharị aka na peculiar scratching niile na-ekwu ihe banyere onye ị na-sizing na-enyere gị aka ime mkpebi banyere ma ị kwesịrị ị na-eme ka a ụbọchị ma ọ bụ mee ihe ngọpụ.
Face na-ahụ ihu, na ị nwetara a ton nke dị iche iche n'ókè na-agwa gị nnukwu ichekwa banyere onye ị na-eche echiche nke na-akparị ụka na-.
Online, na ị nwetara ihe ọ bụla na-aga ma ihe onye na-eme na ha profaịlụ ma na-ede ha email.
“N'adịghị ka n'ezie na-ndụ mmekọrịta ebe i nwere ụfọdụ echiche nke ihe a onye draịva, ihe ha na-ele anya dị ka, otú ha na-ebi ndụ, wdg, online i nwere onye ọ bụla nke na,” na-ekwu, Lisa Hupman, a vetiran cyberdater guzobere WildXangel.com, a website na adọ aka ná ntị ọzọ daters banyere ihe ize ndụ na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. “Ị na-enye ndị ọzọ obi karịa bụ n'ezie ruru n'ihi na unu enweghị oke.”
Na ihe i nwere oke-ma ọ bụ ọzọ n'ụzọ ziri ezi, obere oke-banyere larịị nke obi ị na-enye bụ na isi ngwá ọrụ na-echebe gị online bụ otu ihe ahụ na-echebe ndị ya mgbe ụfọdụ nutcase onye roams na Web: anonymity.
E nweghị ụzọ maka mmadụ abụọ na-agbanweta ozi ịntanetị online mara n'ezie na identities nke ndị ha na-ede na-. The email ị na-enweta ala na igbe dị na saịtị.
Aha ị na-ahọrọ bụ otu ị mepụtara na kwesịrị iburu adịghị mmekọrita gị ezigbo njirimara.
Dị ka ogologo oge unu adịghị ka gị ezigbo, aha ileghara n'ihu gị na wuru a ụfọdụ ego nke obi, ị na-amalite ihe online mmekọrịta n'ụzọ zuru ezu na-echebe site eziokwu na onye na-ede gị ọ dịghị ihe echiche onye ị bụ, ebe i bi ma ọ bụ otú ha nwere ike ga-esi jide nke gị n'èzí saịtị.
Mgbe ị na-akpa na online, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị njirimara na nke ahụ na-eme na-achọ dị naanị na Internet. E nwere ihe a zuru ezu mgbochi n'etiti gị online onwe na ezigbo gị na na mgbochi bụ gị mma nchedo ọ bụla wacko gị pụrụ keihuojoo ezu izute online.
Ọ bụrụ na ị nwere ọjọọ chioma izute a loony na a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị, dị ka ogologo oge ị na-na-njirimara gị a nzuzo, e nweghị ụzọ na ha nwere ike inye gị nsogbu na ndụ n'ezie.
N'ezie, na-arụ ọrụ maka ha kwa. N'ihi na e nwere ihe ọ bụla ụzọ ka ị na-elele njirimara nke onye i zutere online, na ị nwetara enweghị echiche ma dọkịta bụ onye zitere gị otu ozi-nwetara ya ma ọ bụ ya n'ókè akwụkwọ Harvard, dị ka ha na-ekwu, ma ọ bụ iwu ya na a website na Romania. Ị nwetara enweghị echiche ma ọ bụrụ na ha na-n'ezie na-arụ ọrụ maka Peace agha maka ikpeazụ afọ abụọ ma ọ bụ nọrọ na oge akwa akwa mailbags na a ala n'ụlọ mkpọrọ. Na na ị nwetara enweghị echiche ma onye kọwara onwe ha dị ka omiiko ga-ahapụ naanị gị mgbe ị na-agwa ha na ị na-enweghị mmasị ma ọ bụ kpọgidere n'èzí gbaa gburugburu gị n'ihu ọnụ ụzọ na-eche gị na-abịa n'ụlọ ọrụ.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na e nwere ndị a checklist na ị nwere ike ịga site mgbe ị izute onye online. Ọ bụrụ na ha kwuru okwu 'knives’ ihe karịrị ugboro atọ mbụ email, i nwere ike tinye akà rà na a igbe. Ọ bụrụ na ha kwuru na ha na-eje ozi multiple ahịrịokwu maka mpụ ime ihe ike, nke ga-eduga gị nne Mmetụta ọzọ igbe. Ọ bụrụ na ha na-ekwu banyere ọbụbụenyi ha na Unabomber ga-tie ha.
Ma ọ bụghị ihe na mfe.
The ụzọ kasị mma na-onwe gị mma online bụ ịgbaso atọ mfe iwu: na-gị anonymity dị ka ogologo oge dị ka o kwere; na-echeta na ọ bụrụ na ihe na-adị na-ezighị ezi, ikekwe ọ bụ; na bee ha ngwa ngwa na n'ụzọ zuru ezu dị ka anya dị ka ị na-esi isi ihe fishy.